Xiddig Aan Aheyn Lionel Messi Oo Lama Taabtaan Ka Noqday Barcelona & Ronald Koeman Oo Eexasho Sameynaya - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Xiddig Aan Aheyn Lionel Messi Oo Lama Taabtaan Ka Noqday Barcelona &...
Ronald Koeman ayaa si cad u sheegay markii uu noqonayay tababaraha Barcelona inuusan isbedel ku sameyn doonin shaxdooda.
Isku shaandheynta ma aheyn wax uu qorsheynayay inuu si joogta ah u sameynayo ama sabab la’aan.
Laakiin kubada cagta waa mid aan saadaal laheyn. Dhaawacyo iyo ganaaxyo ayaa ku qasbay inuu isbedelo badan sameeyao ka dib 10 kulan uu kooxda hogaaminayay.
Koeman ayaa labo shax oo isku mid ah soo safay kaliya labo kulan oo kala aheyd kulankii Villarreal iyo Celta Vigo.
Ilaa iyo 22 ciyaaryahan ayaa daqiiqado ay ku ciyaaraan helay xilli ciyaareedkan.
Ciyaartoyda qaar waa kuwa inta badan ka soo muuqda shaxda Koeman, laakiin xiddiga uu u janjeero mar walba waa Frenkie de Jong oo uu tababare ugu soo ahaa xulka Holland.
De Jong ayaa ah ciyaaryahanka kaliya ee kooxda ku jira ee aan marnaba shaxda laga bedelin, waxa uu ilaa iyo haatan ciyaaray 890 daqiiqo waana xiddigaha daqiiqadaha ugu badan dheelay kooxda oo dhan.
Lionel Messi, Sergio Busquets, Ansu Fati iyo Pedri ayaa iyagana loo arki karaa lama taabtaan iyagoo ka mid ah qorshayayaasha tababare Koeman. Dhamaantood waa ay ka qeyb qaateen 10ka kulan inkastoo mararka qaar ay kursiga keydka ka soo kacayeen.
Messi ayaa ah xiddiga labaad ee daqiiqadaha ugu badan dheelay isagoo ciyaaray 855 daqiiqo madaama uu kursiga keydka fadhiyay kulankii Real Betis ka hor inta uusan natiijo keenin.
Previous articleShirka Musharaxiinta Madaxweynaha oo war laga soo saaray maalinkii koowaad
Next articleDHAGEYSO: Warka Habeen 21-11-2020